डोजर ड्राइभर नै प्राविधिक, सडक कस्तो बन्ला ? « GDP Nepal
( Friday, December 4, 2020)
डोजर ड्राइभर नै प्राविधिक, सडक कस्तो बन्ला ?
Published On : 16 December, 2018 6:20 am
जुम्ला । जुम्लाका आठै स्थानीय तहद्वारा निर्माण गरिएका कुनै पनि ग्रामीण सडक मापदण्डअनुसार निर्माण भएका छैनन् । बिना प्राविधिक स्टिमेटअनुसार डोजर चालकलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेपछि, मापदण्डअनुसार सडक निर्माण नभएको पाइएको छ ।
डोजर चाकलाई प्राविधिक बनाउँदा मनपरि तरिकाले सडक निर्माण भएका छन् । तर कसैले पनि यस विषयमा नबोल्दा आयोजनाको भुक्तानी पनि भइसकेको छ ।
निर्माण आयोजनाको नत सार्वजानिक सुनुवाइ गरिएको छ । नत, सडक निर्माणको कुनै स्टिमेट नै गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी मनपरि तरिकाले गाउँ बस्तीको सौन्दर्य बिग्रने गरी सडक निर्माण भएको प्रति नागरिकले गुनासो गरेका छन् । हिमा गाउँपालिकाको आदी सडक, तातोेपानी गाउँपालिकालको जर्मी गाउँको सडक, पातारासीका गाउँपालिकाको माथि लोर्पा जोड्ने सडक, तिला गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको कुनै सडक ईआईए तथा आईईए नगरिएको अधिकारकर्मी मेघराज न्यौपानेले बताए ।
वडा अध्यक्ष नै, सडक निर्माणको ठेक्का लिन्छन् उनले भने, “बिना प्राविधिक स्टिमेटको डोजर चालकलाई प्राविधिक बनाएर सडक खन्न लगाउँछांै । उनले थपे अन्ततः बिना सार्वजनिक सुनुवाइ नागरिकहरूको गुनासालाई बेवास्ता गर्दै आयोेजनाको भुक्तानीसमेत दिएका छन् । पातारासी गाउँपालिका–३ तल्फी जोड्ने सडक बिना अनुगमन भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । कर्णाली रोजगार अन्तर्गत सबै सडक नागरिकले श्रम गरी निर्माण गर्नुपर्ने हो ।
महासंघ पदाधिकारीलाई परिसंघको बधाई, निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वािणज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नै सचिवालयमा
आईसीआईसीआई बैंकको प्रतिनिधि कार्यालय नेपालमा, गभर्नर र राजदूतद्वयले गरे उदघाटन
काठमाडौं । भारतको आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेडले नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । बिहीबार
निजी क्षेत्रसँग नियमित र संस्थागत संवाद गर्नेछुः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रसँग नियमित र संस्थागत संवाद गर्ने बताएका छन् ।
डीडीसीको निजीकरणको पक्षमा महासंघ, सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन !
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले डेरी व्यवसाय गर्ने नभइ निजी उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने